Cameron.....: May 2011
မောင်နဲ့ကျမ စကားများရန်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ ကျမ…မဖြစ်ချင်ဆုံးက ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စပဲ….။
ကျမကိန်းဂဏန်းတွေကိုမုန်းတယ် နံပါစဉ်တွေကို မုန်းတယ်… အရေအတွက်တွေကို မုန်းတယ်….။
ကျမငယ်စဉ်ကတည်းက သချာင်္ သိပ်ညံ့ခဲ့ဲ့ဲ့ဲ့တယ်…။ သချာင်္တွက်ရမှာကိုလည်း သိပ်ကြောက်ခဲ့တယ်…။
ဆယ်တန်းအောင်လို့ တက္ကသိုလ်တက်ရတော့ သချာင်္မပါတဲ့ မေဂျာကိုရွေးယူပြီးတက်ခဲ့တာ….။
ဟော…ခုကျောင်းပြီးတော့ လုပ်ရတဲ့အလုပ်က နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဂဏန်းပေါင်းစက်ကို လက်ကမချရသလောက်ပဲ….။
မောင်က ကျမထက်သာပြီးဆိုးသေး….စာရင်းဆို လုံးဝမကိုင်ချင်…ရလာသမျှငွေတွေ လစာတွေကို
ကျမဆီအကုန်ထိုးအပ်တယ်….။ ဘဏ်စာအုပ်လဲ ကျမနာမည်နဲ့ထားတယ်… ။ သူကိုယ်တိုင်
ငွေသွားမထုတ်ချင်ဘူး….။ ကျမကလည်း မောင်ပေးသမျှကို သေချာစာအုပ်နဲ့ကို
အ၀င်အထွက်စာရင်းလုပ်ထားပါတယ်…။ တကယ်တမ်း ကျမဖြစ်ချင်တာက ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်…
မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်… အနုပညာဆို ဘာမဆို စိတ်ဝင်စားတယ်…။ ကြော်ငြာမော်ဒယ်လ်ကတော့
မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့…။ မောင်ကလည်း ဒီအလုပ်ပေးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ…။ ဒါပေမယ့် လုပ်နေရတဲ့
အလုပ်နဲ့ ၀ါသနာက တခြားဆီ…။ တခါတခါ အလုပ်အဆင်မပြေတဲ့ အချိန်ဆို သိပ်ကိုစိတ်ပျက်ဖိုို့ကောင်းတာ….။
ဘယ်တော့မှာများ ငါ့ဖြစ်ချင်တာတွေကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မှာပါလိမ့်လို့ တွေးတွေးပြီးတော့လဲ
၀မ်းနည်းဆို့နင့်လာတတ်တယ်….။ မောင်ကတော့ ကျမအလုပ်က အဆင်မပြေရင်
အမြဲအားပေးတတ်တယ်…မီ'ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တာကို တစ်နေ့ဖြစ်အောင် မောင်…အကောင်ထည်ဖော်
ပေးမယ်တဲ့….။ အဲဒီအခါမျိုးဆို ကျမမောင့်ရင်ခွင်မှာမျက်နှာအပ်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေးကို စိတ်ကူးရတာ
တစ်နေ့က မောင်ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိဘူး…။ သူ့လက်ကျန်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲ သူပေးတိုင်းရော…
စာရင်းထဲထည့်ရဲ့လား ဘာလားနဲ့ မျက်နှာကလည်းအတည်ပေါက်နဲ့ ကျမကို မယုံသလို စစ်လား
ဆေးလားလုပ်တယ်…။ ကျမကလည်း ကိုယ့်ကို အဲဒီလို မယုံမကြည်အကြည့်မျိုးနဲ့ လာကြည့်တာကို
လုံးဝမခံနိုင်တာ…။ အိုကေ ကျမတကယ်ထည့်မထည့် ဘဏ်စာအုပ်စစ်ကြည့်ဆိုတော့လည်း မကြည့်ဘူး….။
ဒါဆို ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ်ထားမလား…။ အဲလိုစကားအခြေတင်ပြောရင်းနဲ့ တင်းကုန်ကြရော….။
မနက်စောစောစီးစီး စကားမများချင်ပါဘူး…။ အထူးသဖြင့် အလုပ်သွားခါနီး ရန်မဖြစ်ချင်ဆုံးပဲ….။ မောင်က
ဒါဆို ဒီနေ့ဘဏ်ဖွင့်တယ်မဟုတ်လား အကုန်ထုတ်လာခဲ့ အဲဒီငွေတွေကိုတဲ့….။ ကျမမောင့်မျက်နှာကို
သေချာကြည့်လိုက်တယ်…။ မောင်ကျမကိုနောက်နေတာလား….။ မောင့်မျက်နှာကို ခုထိမဖတ်တတ်သေးတာ
ကျမတော်တော်ညံ့ပါသေးတယ်လို့ ၀န်ခံပါတယ်…။ အိုကေ… အိုကေ မောင့်ကို ကျမအရှုံးပေးပါတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကျမကို အတည်ပေါက်နဲ့ မစပါနဲ့တော့….။ ကျမပြောထားပြီးသားလေ… ကျမဘာ
အလုပ်အကိုင်မှ မရှိတော့ရင်တောင် ကျမမကြိုက်တဲ့ ဒီစာရင်းအလုပ်ကို
မောင့်အတွက်ထာဝရလုပ်ပေးပါ့မယ်လို့…။ ဖြူဖွေးကြည်စင်နေတဲ့ မောင့်မျက်နှာက ခရမ်းရောင် အစိမ်းရောင်
သွေးကြောမျှင်တွေကိုတောင်မြင်နေရတယ်….။ မျက်နှာကျောတွေပြေလျော့ပေမယ့် မောင့်မျက်လုံးတွေက
အငွေ့သိပ်မပြယ်သေး….။ ရုံးသွားခါနီး မောင့်နဖူးကို နမ်းမွှေးရင်း ပြန်ချော့ရသေး…။ ကျမအလုပ်မှာ
အိမ်ကစိတ်ရှုပ်စရာတွေကို သယ်မသွားချင်ဘူး…။ အဲဒီကျတော့ မောင်က ခပ်ဆဆလေးနဲ့ ကျမ…မမြင်အောင်
ပြုံးသေးတယ်…။ အဲလိုမောင်က ကျီစားသန်သူ…အတည်ပေါက်နဲ့လေ….။ သူကအရင်ရန်စ ပြီးရင် သူကပဲ
ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ နေ့သစ်အစလေးပြီးဆုံးသွားတော့တယ်....။
Posted by Cameron at 15:359comments:
ခေါပျဉ်၊ ရွှေထမင်း၊ မုန့်လိတ်ပြာ၊ စလူမုန့်၊ သာကူမုန့်ဦးနှောက်
မုန့်ဗိုင်းနောက်၊ အုန်နို့နဲ့ဆမ်းစားမလား ဒီတိုင်းနှမ်းလေးနဲ့အုန်းသီးခြစ်လေးနဲ့စားမလား
သီးစုံမုန့်စိမ်းပေါင်း သူလဲ ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်ကလေးနှစ်ရုပ်နဲ့
ဒီမုန့်ပုံတွေက အမချစ်ကြီး(ချစ်ကြည်အေး) လာလည်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးပတ်ပြီးအပြန် မဂိုလမ်းထဲမှာ စာအုပ်ရှာရင်း မုန့်ဝယ်တုန်းရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေ ...။ နည်းနည်းတောင်ကြာသွားပြီ....။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လပိုင်းလောက်ကတည်းကပါ...။ အဲနေ့တုန်းက ကျမတို့ အမချစ်လိုချင်တဲ့ စာအုပ်ရှာရင်း အပြန်မြေနီကုန်းက ရွှေရည်မှာ လက်ဘက်ရည်သောက်ဖြစ်ကြသေးတယ်...။ အဲဒီက မြန်မာမုန့်တွေကိုတော့ ဓါတ်ပုံမရိုက်ထားလိုက်မိဘူး...။ နောက်နေ့ကျတော့ အမချစ်က သူ့ချစ်ချစ်ရှိတဲ့ မန်းကိုခရီးထွက်သွားပြီ...။ ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ ကျမက ချောင်းသာရောက်နေလို့ ထပ်မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ဘူး..။ အမချစ်စရောက်တုန်းကတော့ မမြသွေးနီနဲ့ ကိုဏီလင်းညိုတို့နဲ့ ၀ိုင်ကေကေ ကြေးအိုးမှာ ဆုံဖြစ်တယ်....။ မနှစ်က ဒီလိုချိန်ပဲ အဖြူရောင်နတ်သမီး၊ ညလင်းအိမ်တို့နဲ့ဆုံဖြစ်သေးတယ်... ။ ဘာမှသိပ်မကြာသေးသလိုပဲ ခုဆိုတစ်နှစ်ရှိသွားပြီ...။ ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ ညလင်းအိမ်နဲ့ထပ်ဆုံဖြစ်တယ်....။ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကိုယ်မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ကိုယ်နဲ့ညီအစ်မရင်းလိုခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရတာ ၀မ်းသာကြည်နူးစရာပါ...။ နောက်တစ်လနှစ်လလောက်ဆိုရင် ကဗျာဆရာနောက်တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံဖြစ်ဖို့ရှိသေးတယ်....။ အဲဒီကျမှ... မြန်မာ့အစားစာကို နှစ်ရှည်လများ ကင်းဝေးနေနဲ့သူ... ဘာတွေအစားသောင်းကျန်းမလဲဆိုတာ ဆက်ပြီးတင်ပါဦးမယ်...။
Posted by Cameron at 16:54 12 comments:
လေပွေသေးသေးလေးတစ်ခုကြောင့် ကုက္ကိုရွက်ခြောက်လေးတွေ ချလပတ်ရမ်းလည်နေတာ
ခုလိုဆောင်းရာသီ ချမ်းချမ်းစီးစီးမှာ အိမ်ရှေ့မြေသလင်းပြင်က ကြွေကျတဲ့ ကုက္ကိုရွက်တွေကို
မီးခိုးရောင်ခပ်မှိုင်းမှိုင်းသန်းနေတတ်တဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ သစ်ရွက်မီးရှို့တဲ့အနံ့နဲ့မှ
ပိုပြည့်စုံသွားသလိုလို…။ အ်ိမ်ရှေ့ကပျဉ်လေးမှာ မီးဖို ခေါပုတ်လေးကင်စားလိုက် မီးလုံလိုက်နဲ့ အဲဒီဓလေ့တွေကို
လွမ်းဆွတ်တမ်းတမိပေမယ့်လဲ ဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့…။ ကန်ရေပြင်ပေါ်က လှိုင်းကြက်ခွတ်လေးကို
ငေးမောရင်း ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းက အချိန်ကိုသတိရမိသွားတာပါ…။
တကယ်တော့ အများအမြင်မှာဘ၀ကို သာသာယာယာကလေး ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း
ကိုယ့်ကတော့ အဲလိုမထင်ပါဘူး…။ လူတိုင်း ဘ၀မုန်တိုင်းထန်ချိန် လေနီကြမ်းတိုက်ခတ်ချိန်တော့
ကြုံဆုံခဲ့ကြဖူးစမြဲပါပဲ….။ လေတိုက်နှုန်းမြင့်တာနဲ့ နိမ့်တာပဲကွာမှာပါ…။ ဘ၀မုန်တိုင်းထန်ခဲ့ချိန်
ပင်လယ်မျက်ရည်ဝေခဲ့ချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ဖူးတဲ့နောက်မှာ… ကိုယ်အတွက်
ဒါပေမယ့် လေနုအေးဆိုတာကို မသိခဲ့ဖူးသူကိုယ့်အတွက်တော့ ဘယ်ချိန်မှာ လေနုအေးလေး
တိုက်ခတ်သွားသလဲ ကိုယ်သိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး…။ တကယ်တမ်းလည်း မသိခဲ့ပါဘူး….။
ခုချိန်မှာ ကိုယ်နားလည်သိရှိခံစားနေမိတာကတော့ လတ်ဆတ်တဲ့ လေပြေလေးတစ်ခုပါပဲ…..။
လေပြေစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး ကိုယ့်ဘ၀လေး သာယာကြည်နူးဖွယ် ကောင်းလာတယ်..။
ဟိုအရင်ခါတွေက နေချင့်စဖွယ်မကောင်းပါလားလို့ ထင်ခဲ့မိတဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးတောင်
ပြောင်းလဲစိမ်းလန်းလို့….ကိုယ်တောင် မက်မောတွယ်ဖက် တတ်လာတယ်….။ အဲဒါ……………လေပြေရဲ့
ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်လို့ ကိုယ်ထင်ပါတယ်…….။ လေပြေဟာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အပူပင်တွေအားလုံးကို
တခါတခါလေပြေဟာ ကိုယ့်ကို လှပကျယ်ပြန့်ပြီး မွှေးပျံ့တဲ့ ပန်းခင်းတစ်ခုထဲကို ခေါ်ဆောင်သွားတတ်တယ်…..။
အေးစိမ့်ကြည်လင်တဲ့ တောင်ကျရေတွေဆီ ခေါ်ဆောင်သွားတတ်တယ်…။
လတ်ဆတ်တဲ့ စပါးခင်းစိမ်းစိမ်းတွေထဲ ခေါ်ဆောင်သွားတတ်တယ်။
တံမြက်စည်းပင်တွေဝန်းရံနေတဲ့ ရေစီးသန်တဲ့ မြစ်ကမ်းနဘေးဆီ ခေါ်ဆောင်သွားတတ်တယ်…။
ပ၀ါတွေ ဆံနွယ်တွေလွင့်ပျံနေတတ်တဲ့ တောင်ထိပ်ဖျားတွေဆီ ခေါ်ဆောင်သွားတတ်တယ်..။
ဗိုက်ထဲဂွီခနဲအသံမြည်လာအောင်… စားချင်ဖွယ်ရာများနဲ့ မီးဖိုဆောင်ထဲလည်း
ကိုယ်ကတော့ လေပြေခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကို ပ၀ါပါးတစ်စလို့ လွင့်မျောလိုက်ပါလို့…….။
တလောကလုံးမှာကိုယ်ရယ် လေပြေလေးရယ်ပဲ… ဘယ်လောက်ပျော်စရာ ကောင်းလိုက်မလဲ..။
အဲဒီတောင်ထိပ်ဖျားကနေ ကိုယ်ရယ် ပုဝါပါးလေးရယ် လေပြေရယ်…အတူတူ…. ဟိုးးး
အစိမ်းရင့်ရောင်တောအုပ်တွေဆီ ထိုးခွဲဆင်းချသွားရင် ဘယ်လိုနေမလဲလို့…။ ကိုယ်နဲ့အတူ
လေပြေလေးလိုက်ခဲ့ပါ့မလား ပ၀ါလေးကရောကိုယ်နဲ့အတူပါမလာဘဲ… အခြားတနေရာကိုလွင့်သွားမလား…..။
note: မသက်ဝေရဲ့ “လေပြေအလာ”အက်ဆေးကိုဖတ်ပြီး ပြန်ရေးဖြစ်တဲ့ မိုးငွေ့ရဲ့ လေပြေဖြစ်ပါတယ်....။
နှင်းသီးတွေ စိမ်းနေတုန်း အပင်ပေါ်မှာ
ဒီပန်းအနီလေးလည်း ထူးဆန်းတယ် အပွင့်အပြင်
အလည်ဝတ်ဆံက အသီးလိုလို အတံလေးတွေပါသေးတယ်
လှလို့သာရိုက်လိုက်တာ ပန်းနာမည်တွေကိုမသိဘူး အောက်က ပုံတွေရောပဲ
သိရင် ဘာပန်းလဲဆိုတာ ပန်းချစ်တဲ့သူတွေ ကော်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါ
စက္ကူပန်းပွင့်လေးရဲ့ အလည်က ပန်းအဖြူလေးသိပ်လှတယ်
floral ထဲကတော့မဟုတ်ဘူး herb အုပ်စုထဲကထင်တယ်
ဒီ kiss me quick ကအရောင်လေးစိုတောက်နေတာပဲ
နှစ်ထပ်ပွင့်နေတဲ့ kiss me quick
ကျမ..... ပန်းတွေကိုကြိုက်ပေမယ့် နာမည်စုံသိပ်မသိဘူး....။ တကယ်ပန်းကြိုက်တဲ့သူတွေ ပန်းချစ်တဲ့ သူတွေက အိမ်ဘယ်လောက်ကျဉ်းကျဉ်း အိုးကြီး အိုးငယ်နဲ့ စိုက်တတ်ကြတယ်...။ ပွင့်လာတဲ့ပန်းတွေကို ဘုရားပူဇော်တယ်...။ ခေါင်းမှာ ဝေနေအောင်ပန်တတ်ကြတယ်...။ ပန်းတွေကို လှလို့ချစ်တယ်....။ အဲဒီအတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်သိမ်းထားတတ်တယ် ... ဒီလောက်ပဲ...။ ပန်းလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ အဆင့်တော့မရောက်သေးဘူး...။ တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာချင်ရင် အပင်စိုက်တဲ့....။ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ကျမအပင်စိုက်ဖြစ်မှာပါ....။ ခြံဝင်းလေးနဲ့ အိမ်တစ်လုံးပိုင်ခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ်.... မြို့ပြင်ဘက်မှာ သီးပင်ပန်းပင်တွေစိုက်နိုင်မယ့် မြေကွက်တစ်ခု ၀ယ်နိုင်ခဲ့ရင်....ပေါ့...။ ပထမဦးဆုံးစိုက်ဖြစ်မှာကတော့ စကားဖြူပင်တွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်...။ ဒါပေမယ့် သူက နှင်းဆီပန်းတွေလို ခုချက်ချင်းစိုက်ပြီး မြန်မြန်အပွင့်ပွင့်တဲ့ အပင်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့...။ နှစ်ရှည်ပင်ဖြစ်သွားပြီ....။ နှင်းဆီပန်း အဖြူရောင်လေးတွေကို ကြိုက်တယ် စိုက်လည်းစိုက်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် အပင်ကကျလာမယ့် အကောင်လေးတွေကိုကြောက်လို့.... လိုချင်ရင် ပန်းဆိုင်မှာပဲဝယ်ဖြစ်တော့တယ်...။ ပိုးကောင်လေးတွေက သူဘာသာသူနေပေမယ့် ကိုယ်က မွေးရာပါအလိုလိုရင်း သူ့ကိုကြောက်နေတာကိုး...။
Posted by Cameron at 09:34 10 comments:
ရှမ်းငါးစင်းကော၊ ကြက်သည်းကြက်မြစ်ကြော်၊ ဒန်ပေါက်ထမင်း
ရှမ်းအမွှေးအကြိုင်အရွက်မျိုးစုံဖြစ်တဲ့ ပဒဲကော စပါးလင် ပင်စိမ်း ရှမ်းနံနံ စတာတွေကို ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ အားလုံးနုတ်နုတ်စင်းပစ်လိုက်တယ်...။ အဲဒါကို ဆီသတ် မွှေးလာရင် ငါးမြစ်ချင်းခြစ်ထားပြီးသားကိုထည့်မွှေကြော်... မွနေအောင်ကြော်ပေး... ငါးစင်းကောဖြစ်ပြီ...။
ကြက်သည်းမြစ်ကတော့ ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်သလိုပါပဲ မွှေးတေးတေးအရသာရလို့ အဲဒါရှောက်ဘီလူးသီးအရွက်ထည့်ကြော်ထားတာတဲ့....။
ရုံးကိုထမင်းဗူးထည့်ခဲ့တာ.... ကျမလက်ရာမဟုတ်ကြောင်းတော့ အရင်ဦးဆုံးဝန်ခံပါရစေ....။ တစ်နေ့က မောင်တစ်ဝမ်းကွဲ အိမ်သစ်တက်တော့ ပိုတဲ့ ဘုန်းကြီးဆွမ်းဟင်းတွေပါ....။ လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုတော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ကျိုင်းတုံမုန့်တီအရည်နဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်း ရှမ်းငရုတ်သီးထောင်း ၀က်ခေါက်ကြော် စုံနေတာပဲ ရှမ်းစာတွေမှ...။ မနက်စောစောစီးစီး ရုံးမသွားခင် ၀င်ကြိတ်ပစ်လိုက်တာ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်ဖို့မေ့သွားတယ်....။ မုန့်တီတစ်ပန်းကန်ကြီးနဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းတစ်ထုပ်စားလိုက်တာ တစ်နေကုန် နေ့လည်စာပါလွတ်ရော လုံးဝ ဗိုက်မဆာတော့ဘူး...။ အချိုပွဲက အသီးစုံ အုန်းနို့ကျောက်ကျောအိအိကလေးပါသေး...။ ဒါနဲ့ ညနေကျ မောင်လေးဆီဖုန်းဆက်ပြီး ခေါက်ဆွဲကျန်သေးလားဆိုတာ့ ၀က်သားဟင်းနဲ့ပဲကျန်တော့တယ်တဲ့... အိုကေ ဒါဆို ငါလာစားမယ်....လို့ပြောလိုက်တယ်...။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲအနှစ်ကို ကြက်သားနဲ့တစ်အိုး ၀က်သားနဲ့တစ်အိုး ချက်ထားတာကိုး....။ ကြက်ကိုအားပေးသူများတော့ သူက အရင်ကုန်သွားတယ်...။
ညနေအိမ်ပြန်ရေမိုးချိုးပြီး ပြန်ဆင်းတယ်....။ မေမေက ဘယ်လဲမေးတော့ ...ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေ... အဲဒါနောက်ထပ်သွားစားမလို့ လို့ဖြေပြီးထွက်ခဲ့တယ်....။ အိမ်နဲ့က နှစ်လမ်းကြော်လောက်ကပဲ ဆိုတော့... မိုးငွေ့တို့အတွက် စားကြောအိမ်တစ်အိမ်တိုးလာတယ်မှတ်ပါတယ်...။ ဟိုရောက်တော့ ခြောက်ထပ်ကြီးတောင် တက်သွားရတာ လူက မောပြီး ချက်ချင်းမစားနိုင်ဘူး...။ ခဏနား အအေးလေးဘာလေးသောက် ...အလ္လာမ သလ္လာပတွေပြောပြီးတော့မှ.... ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို မီးဖိုထဲ ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ထည့်စားလိုက်တယ်...။ အပြန်ကို အဒေါ်က ကြက်သည်းမြစ်ကြော်နဲ့ ငါးစင်းကောရယ် ဒန်ပေါက်ကတော့ အသားမကျန်တော့လို့ ထမင်းချည်းပဲ တစ်ထုပ်ကြီးပေးလိုက်တယ်...။
အိမ်ရောက်တော့ ပါလာတဲ့ဟင်းအသီးသီးကို ဗူးထဲသေချာပိတ် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းလိုက်တယ်....။ မနက်ကျတော့ တစ်ခုစီ မိုင်ခရိုဝေ့ထဲထည့်နွှေးပြီး ရုံးကိုထမင်းဗူးယူခဲ့တယ်....။
Posted by Cameron at 08:514comments:
ခုနှစ်မိုင်ခွဲက ကိုးရီးယားဆိုင်မှာသွားစားတာ ထမင်းသုပ်
အရံဟင်းခွက်လေးတွေ ... ပဲငါးပိ ကင်မ်ချီ ဟင်းနုနွယ်ရွက်နဲ့နှမ်းဆီသုပ်... မုန်လာဥဖြူချဉ်ဖတ်
တော်ဝင်စင်တာ မြေအောက်ထပ်က ချန်ပီယံကြက်ကြော်ဆိုင်
စားပါဦး ကြက်ကြော် (တကယ်တော့ ကျမက သက်သတ်လွတ်မို့ အာလူးချောင်းမှာစားတယ်
အချိုပွဲ ငချိပ် သရက်သီး အုန်းရည်တဲ့ ချဉ်ပြုံးပြုံးအရသာနဲ့
ဒါက ငချိပ် ပဲနီ အုန်းရည်ပါ... အဲဒီဆိုင်မှာ ရေခဲမုန့်လဲ အစုံရသေးတယ် တော်ဝင်စင်တာ မြေအောက်စက်လှေကားထိပ်နားလေးမှာပဲ...ဆိုင်သေးသေးလေး
Posted by Cameron at 09:114comments:
သူ့ကိုတော့ သိကြမှာပါ.... ကျမတို့ရဲ့ မောင်လေး အမြဲအသည်းကွဲနေတတ်တဲ့ လွမ်းဆွေးဖွယ်ရာ ကဗျာလေးတွေကို ဖန်တီးတတ်တဲ့ ညလင်းအိမ်ပါ...။ သူရန်ကုန်ပြန်ရောက်တုန်း ဧည့်ခံကျွေးမွေးဖြစ်တာကတော့ မြေနီကုန်း စီးတီးမတ်အောက်ထပ်က Happy ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာပါ....။ မောင်တူးရှေ့က ပန်းကန်ကတော့ အမဲသားခေါက်ဆွဲဖြစ်ကြောင်းပါ...။ ဒီတစ်ခေါက် အမမိုးငွေ့ကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ဟင်းမစားလိုက်ရလို့ မောင်တူးပွစိပွစိလုပ်သေးတယ်....။ အချိန်မရလို့ ပြန်ခါနီးတော့ မိုးငွေ့လက်ရာ ငါးပိထောင်းလေးနည်းနည်းနဲ့ မြစ်ကြီးနားကလက်ဆောင်ရတဲ့ ဆီတိုဖူးလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်....။
အရံအမြည်းလေးတွေ တိုဖူးခြောက်ကြော်နဲ့ ငှက်ပျောသီးကြော်....
ဒါကတော့ သက်သတ်လွတ် ရှမ်းမုန့်တီအရည်ပါ....။ ခုတလော သက်သတ်လွတ်စားဖြစ်နေလို့.... အဲဒီမုန့်တီလေးမှာစားတာ တော်တော်လေးကောင်းတယ်...။ တခြားဘလော့ဂ်ဂါတွေနဲ့တော့ မတွေ့ဖြစ်ပါဘူး...။ အဲ....ဒါပေမယ့် ခေါင်ခေါင်နဲ့တော့ ပါရမီလမ်းက ပင်လယ်စာနဲ့ မုန့်တီအတူသောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်...။
Posted by Cameron at 12:114comments:
အချစ်ဟာ...အချစ်သာဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်ခြင်း လက်ထပ်ခြင်း စည်းမျဉ်းစတာတွေနဲ့ လုံးဝမပတ်သက်တာကိုတော့ လက်ခံထားတယ်..။ လူဟာ (ကံကြမ္မာကလွဲရင်) ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်သာပိုင်တယ်..။ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ ရှိရမှာပေ့ါနော်...။ ဒီလိုဆိုပြန်တော့ မိစ္ဆာငှက်ရဲ့ အတောင်ပံခတ်သံအောက်မှာ အရာအားလုံးအနာဂတ်မဲ့သွားတော့တယ်...။ “နေရစ်ခဲ့တော့ကွယ်... အနီးအဝေးဆိုတာ အချစ်မှာမရှိဘူး... ဘယ်လိုကြားခံနယ်မျိုးကမှ အချစ်ကိုပြောင်းလဲ ယိမ်းယိုင်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး..။ ၀မ်းနည်းစွာ....နောက်ပြီး ယုံကြည်စွာ သွားပါရစေတော့...။ ဘယ်မေ့နိုင်မလဲ.... အချစ်ဆိုတာ မေ့လို့ရအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုမှမဟုတ်တာ...”
1982 ဇူလိုင်လထုတ် ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော ဆရာမဂျူး၏ “ချစ်သူဖတ်ဖို့စာ” ၀တ္ထုတိုကို နှစ်သက်မိလို့ ဆရာမ၏မူရင်းစာကို အချို့အပိုဒ်မှလွဲ၍ (ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့စကားလုံးတချို့တွေရယ်) စကားပြောပုံစံဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်းဝန်ခံပါသည်...။ ခေါင်းစဉ်ကို “Letters to Juliet” ရုပ်ရှင်ကားအမည်အား သဘောကျသောကြာင့် “Letters to Angel” ဟူ၍ ပြောင်းလဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်...။
Posted by Cameron at 11:374comments:
ပဲပုပ်မှုန့်နဲ့ အာလူးကြော် မြေပဲဆံကြော် ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်နဲ့သုပ်ထားတဲ့ သတ်သက်လွတ်ထမင်းသုပ်
ကြက်ဥကြော်လေးကတော့ နဲနဲ အရုပ်ဆိုးသွားပါတယ်
Posted by Cameron at 09:385comments:
Posted by Cameron at 10:50 11 comments:
အား….ခေါင်းတွေကိုက်လိုက်တာ….မခံမရပ်နိုင်အောင်ပါပဲ….။ မခံနိုင်တာတောင် အိပ်စက်အနားယူဖို့ မစဉ်းစစားဘဲ စာရေးဖို့ စာဖတ်ဖို့ပဲ စိတ်စောနေမိတယ်….။ သေတ္တာဖွင့် ဟိုစာအုပ်ရှာ ဒီစာအုပ်ရှာနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အက်ဆေးတချို့ကို ရွေးချယ်ယူဖတ်လိုက်တယ်…။ နားထင်ဆီက သွေးကြောမျှင်တွေက စောင့်စောင့်ပြီးထိုးနေတယ်…။ အဲဒီချိန်မှာမင်းကို ချက်ချင်း သတိရလွမ်းဆွတ်သွားတယ်…။ ခုလို ကိုယ်ခေါင်းကိုက်နေချိန် မင်းကိုယ့်နားထင်ကို ညင်သာစွာ နှိပ်ပေးမှာ သေချာတယ်…။ ဒီနေရာမှာသေချာတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် လက်တွေ့မဆန်လှပါဘူး…။ ကိုယ်နဲ့မင်း စကားပြောတဲ့အခါမျိုး ကိုယ့်လက်ချောင်းတွေညောင်းညာရင် မင်းနှိပ်ပေးနေကျ….ကိုယ်ခေါင်းကိုက်ရင်လဲ မင်းနှိပ်ပေးနေကျလေ….။ လေအေးစက်တွေက သိပ်အေးလွန်းတဲ့အခါ သူဟာ ကိုယ့်အတွက်နွေးထွေးစေတဲ့ ခြုံစောင်တစ်ထည်လဲဖြစ်သေးတယ်…။ ကိုယ့်ကိုအအေးနဲ့မတည့်မှန်း သိလျက်နဲ့လဲ ဘာကြောင့် အကျီင်္လက်ရှည်ဝတ်မထားလဲ ဘာလို့ ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ပဲနေနေလဲ စသဖြင့် ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ့်ကို အမြဲတမ်း နွေးထွေးလှိုက်လှဲတဲ့ စကားမျိုးကိုသာ ဆိုလေ့ရှိတယ်…။
တကယ်ဆို ကိုယ့်ကမ္ဘာထဲကို မင်းရောက်လာခဲ့တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး…။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်မွေးနေ့မတိုင်ခင် တစ်လအလိုလောက်ကပါ…။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အတိုင်းလေးပါပဲ…။ ဘာမှတော့ အထူးအဆန်းမဟုတ်ဘူး…။ သမာရိုးကျဆန်ပါတယ်…။ သာယာကြည်လင်တဲ့ မိုးကောင်ကင်ပြာပြာအောက်မှာ… သဲသောင်ပြင်နဲ့ စည်းချက်ရိုက်နေတဲ့ ရေလှိုင်းဖွေးဖွေးတွေထဲမှာ…. ချိုမြမြ ရှိန်းတိန်းတိန်းရှိလှတဲ့ အုန်းသီးနုနုထဲမှာ…. သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့ ဂီတသံစဉ်များကြားမှာ…နက်ပြာရောင်ကောင်းကင်နောက်ခံနဲ့ မီးရှုးမီပန်းတွေကြားမှာ ယုန်ဖြူကလေးတွေ ပြေးဆော့ကစားနေတဲ့ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ ကိုယ်တို့ရဲ့ ဆုံတွေ့မှုတွေ စတင်အသက်ဝင်ခဲ့တယ်….။
ဂဏန်းတွက်စက်ပေါ်မှာနေ့စဉ်နှင့်အမျှရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ပေါ်မှာ အမြဲရှိနေတဲ့ မင်းဘ၀…။ ကိုယ်တို့ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် ခရေစေ့တွင်းကျ မသိကြပေမယ့်.. တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နားလည်နိုင်ကြတယ်…။ ဆိုးတူကောင်းဖက် ရဲဘော်ရဲဖက်လို တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မက်မောတွယ်တာလာကြတယ်..။ ဘ၀မှာ အလိုအပ်ဆုံးအဖော် မင်းဟာ…..ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ဟာ မင်းအတွက်ဖြစ်လာတယ်….။ ပျော်ရွှင်စရာ ၀မ်းနည်းစရာတွေကို မျှဝေခံစားတတ်လာတယ်…။ တစ်ခါတစ်ခါ နှစ်ယောက်ထပ်တူညီမျှတဲ့အခါ သူခံစားချက် ကိုယ့်ခံစားချက် တစ်သားတည်းဖြစ်သွားချိန်မှာ ဘ၀ဟာ လိုအပ်ချက်ကင်းမဲ့စွာ ပြီးပြည့်စုံသွားတယ်လို့တောင် ထင်ရတယ်…။ ကိုယ်ကတော့ မင်းနဲ့ ကိုယ့်ကြားမှာ ရှိတဲ့ ချစ်ခင်တွယ်တာမှုကို အဖြူရောင်ကြိုးမျှင်တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်…။
သူက ဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်…. ကဗျာတွေကိုချစ်တယ်…ပြီးတော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ အက်ဆေးလှလှလေးတွေကို ချစ်တယ်…။ ကိုယ်ကတော့ မင်းညည်းဆိုတတ်တဲ့ သီးချင်းသံစဉ်တွေကို နှစ်သက်စွဲလန်းတယ်…။ ကလေးတစ်ယောက်လိုဖြူစင်တဲ့ မင်းအပြုံးတွေကိုမက်မောတယ်…။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မတူညီချက်ကတော့ မင်းက အဖြူရောင်နှင်းမှုန်တွေကိုချစ်ပြီး… ကိုယ်ကတော့ ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ မျက်နှာကိုလာထိမှန်မယ့် မိုးစက်မိုးပေါက်တွေကိုချစ်တယ်…။ အင်းလေ လူတိုင်းကတော့ဖြင့် အကြိုက်ချင်းအကုန်တူဖို့ဆိုတာမှ မဖြစ်နိုင်တာပဲ…။ ဒီလိုပဲ ကွဲလွဲမှုတော့ ရှိကြတာပေါ့…။ ဒါကြောင့်မို့ထင်ပါတယ်…မင်းကြိုက်တတ်တဲ့ အရောင်တွေက နှင်းပွင့်တွေလို ဖွေးဆွတ်တဲ့ အရောင်မျိုးဖြစ်တယ်….။ နေ့တစ်နေ့ ကုန်ဆုံးချိန်ရောက်တိုင်း ကိုယ်အမြဲလွမ်းဆွတ်နေတတ်တာက ညအိပ်ယာ ၀င်ခါနီး မင်းနဲ့ ကိုယ်နှုတ်ဆက်တတ်တာ…Fly Kiss တဲ့ အာဘွားတဲ့…။ အဝေးကမို့ ဒါမျိုးနှုတ်ဆက်ဝံ့တာပါဗျာတဲ့…။ အိုးး…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့…။ အနားမှာဆို ကျွန်တော့်ကို ခင်ဗျားခေါင်းခေါက်ရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲတဲ့…။
အဖြူရောင်တွေချည်း အုပ်မိုးလွှမ်းခြုံထားတဲ့ ကိုယ်တို့ကြားမှာ သိုးမည်းတစ်ကောင်လည်း မပါဝင်ဘူး…။ မိုးခါးရေကို မက်မောစွာ သောက်သုံးသူတွေလည်းမပါဝင်ဘူး…။ ကိုယ်တို့ကို ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့မယ့် မျက်လုံးတွေလဲ မပါဝင်ဘူး…။ မနာလိုဝန်တိုမှုတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်နေမယ့်သူလဲမပါဝင်ဘူး….။ အိန်ဂျယ်ရဲ့ အတောင်ပံခတ်သံအောက်မှာ ကိုယ်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာ အမြဲအတူရှိနေကြမယ်နော်…။ ရွက်ဟောင်းတွေကြွေ ရွက်သစ်တွေဝေလို့ မိုးတွေဖွေးဖွေးရွာသွန်း နှင်းထုတွေ မှုန်မှိုင်း ရာသီစက်ဝိုင်းတွေ အလီလီပြောင်းလဲတိုင်း ကိုယ်တို့ အမြဲအတူရှိနေကြမယ်နော်…။ ကမ်းစပ်ကနေ နေ၀င်ချိန်ကို အတူထိုင်ကြည့်ကြမယ်လေ…။ တံတားဘောင်ပေါ်ကနေ တိမ်တွေ သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရွေ့လျားနေတာကို စောင့်ကြည့်ကြမယ်လေ…။ တောင်ကျရေရဲ့ နရီရိုက်သံကို အတူနားထောင်ကြမယ်…။ ငှက်ဖြူတွေပျံသန်းရာနောက် ကိုယ်တို့ လိုက်ကြမယ်လေ…ဟုတ်လား….။
Posted by Cameron at 17:187comments:
ထုံးစံအတိုင်း မန်းဒေးရုံးပြန်ဖွင့်ရင် ကွန်စဖွင့်တာနဲ့ ဘယ်သူတွေပို့စ်အသစ်တင်သလဲ ဖဘမှာ ဘာတွေဖြစ်နေကြသလဲနဲ့ စပ်စုရတာလေ..။ ဒီနေ့တော့ ဖဘမှာ မသက်ဝေရဲ့ စတေးတပ်စ်က ကိုကြီးကျောက် R.I.P တဲ့...။ ကျမ အဲဒီစကားလုံးကို မယုံနိုင်လို့ ကော်မန့်တွေကို ဖတ်ကြည့်တယ်...။ အမချစ်ကြည်အေးဘလော့ မကြီးရွှေစင်ဘလော့နဲ့ မသက်ဝေဘလော့မှာလဲ အားလုံးတင်ထားကြတယ် ...။ ဒါဆို ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပို့စ်အသစ်တွေကို ကျမတို့ ဘယ်တော့မှ ထပ်ပြီးမဖတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်....။ တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်...။ ကင်ဆာမဟုတ်ဘူး ပြန်နေကောင်းသွားပြီလို့သိရကတည်းက ၀မ်းသာနေမိတာ....။ ကိုကြီးကျောက်ကို ကျမစသိတော့ အမချစ်ဘလော့မှာ “ကိုကြီးကျောက်အတွက် ဆုတောင်းပေးကြရအောင်”ဆိုတဲ့ နိုးဆော်စာလေးကြောင့် ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ ရွှေရတုမှတ်တမ်းဘလော့ကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်...“ယမမင်းသို့ ခြေလှမ်း ၁၈၀”ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကိုစဖတ်ရတာပါပဲ..။ ခုတော့ ကိုကြီးကျောက် လူလောက ကနေရော ကျမတို့ ဘလော့လောက...ကနေပါ အပြီးပိုင်ထွက်သွားခဲ့ပြီတဲ့..။ မယုံနိုင်စရာပါပဲ....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်း ဒီလမ်းကို တစ်နေ့ မလွဲမသွေသွားကြရမှာပဲလေ....။ ကိုယ်ထွက်မသွားခင်... အားလုံးအပေါ်ကောင်းကျိုးပေးခဲ့ ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ဖို့ပဲလိုပါတယ်...။ ကိုကြီးကျောက်ဟာ ထွက်မသွားခင်... သူ့ပို့စ်ကိုလာလည်တဲ့သူအားလုံးကို တာဝန်ကျေသွားခဲ့ပါတယ်...။ သူ့စာလာဖတ်သူအားလုံးကို တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းတော့ ပျောရွှင်ပြုံးရယ်စေခဲ့တာချည်းပဲ....။ ကျမတို့ သူ့ပို့စ်ကို သူ့အရေးအသားကို သူ့ရဲ့ ဟာသယဥာဉ်တွေကို အမြဲလွမ်းဆွတ်နေရတော့မှာပါ...။ ပြီးတော့ ငါ့တူမကြီး မိုးငွေ့လို့ ခေါ်တတ်တဲ့ ကိုကြီးကျောက်ကို အမြဲသတိတရရှိနေတော့မှာ...။ တကယ်တော့ ဒီနေ့ပို့စ်အသစ်တစ်ခုတင်မလို့ပဲ...ခုလိုသတင်းကြားရတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်..။ ဒီနေ့တော့..... ကိုကြီးကျောက်အတွက် ၀မ်းနည်းလွန်းလို့ ဒီပို့စ်တင်ပါတယ်...။ ကျမတို့ အားလုံးဆုတောင်ပေး ကြရအောင်....ကိုကြီးကျောက်တစ်ယောက် ကောင်းမွန်ရာဘုံဘ၀ကို ရောက်ရှိပါစေ....။
Posted by Cameron at 08:516comments: